Ukuzisa uhlalutyo lweshishini kwiWordPress | Martech Zone
NgoLwesine, uJanuwari 14, 2010 NgoLwesihlanu, Novemba 2, 2012 Douglas Karr
Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo bendisebenza kwiprojekthi eyimfihlo ephezulu emnandi. IWebtrends ngumxhasi wam esincedisa ukunciphisa iindleko ngokukhokela, ukwandisa amazinga okuguqula kunye nokuphucula ukubonakala kwi-Intanethi (Ndiyazi ukuba yinto eqhelekileyo… kodwa aba bantu bakwimakethi enokhuphiswano kakhulu!). Ngenani eliphezulu lamashishini asebenzisa iWindowsPress, iyavakala into yokuba iWebtrends izakunika umnikelo odibeneyo… ke siyakhe.
Iplagi yeWebtrends ayisiyiyo iplagi encinci yokongeza eyakho kubahlalutyi ikhowudi kunyawo lwakho-ngekulula kakhulu. Endaweni yokuba sizise iWebtrends engakholelekiyo kubahlalutyi kwiDashboard yeWordPress!
Iprojekthi ibinemiceli mngeni! Ngelixa iWebtrends API yenye yezona zinto zibalaseleyo endakha ndazisebenzisa (tyhala iqhosha kwi-app yakho yoHlaziyo ukuze ufumane ifayile ye API umnxeba!), Ukuzama ukubonelela ujongano olukhethekileyo lomsebenzisi oluhambelana neWordPress lwalunzima kodwa ndicinga ukuba siyibethelele. Kukho iphepha leseto apho ugcwalisa khona API iinkcukacha kwaye ukhethe iakhawunti yakho…. kwaye uvukile uyabaleka!
Ideshibhodi ikwaqhutywa yi-100% yeAjax ukuqinisekisa ukuba ixesha lokulayisha iphepha ligcinwa lisezantsi. Kwakumnandi ukusebenza ngeWordPress 'imodeli yokhuseleko ye-Ajax (isotto encinci apho, kodwa ndiyasiqonda isidingo sokuba ndilungile!).
Ukuba ukhona Indawo yeWebhu Umxhasi kwaye ungathanda ukuvavanya nathi, nceda undazise. Umncedisi wakho uya kufuna ukusebenzisa i-PHP 5+ kunye nelayibrari ye-cURL enikwe amandla ukuze API iminxeba inokufunyanwa kwakhona! Siza kube sithetha ngakumbi nge-plugin apha Qalisa u-2010!
EZINTSHA: Ndilibele ukukhankanya loo nto U-Ole Laursen Ndincedise neqela. Ole ukusinceda ukuba sidibanise ngokufanelekileyo i-FLOT kunye ne-plugin. IFLOTI ngumthombo ovulekileyo jQuery isiseko esitshatileyo sokutshata injini. Uxolo ndilibele ukukhankanya u-Ole! Wayemnandi ukusebenza naye.
tags: wndebguI-webtrends igama lendawoiplagi yamagama
Jan 14, 2010 kwi-5: 55 AM
UDoug - oku kujongeka kukuhle - kwenziwe kakuhle
ndingathanda ukuzama iplagin xa ifumaneka
NgoJanuwari 14, 2010 ngo-3:08 PM
Enkosi uPawulos! Yayiyinto eyonwabisayo… maninzi amathuba okuqhubeka nokuphucula. I-Webtrends ine-API enkulu, iyenze yalula kakhulu. Elona candelo linzima ibikukwakha itshathi esebenzisanayo (ungagqitha ngamanqaku emouse). 😀
Jan 15, 2010 kwi-3: 26 AM
Umsebenzi ongakholelekiyo. Olu luyilo/isisombululo luchule kakhulu. Andikwazi ukulinda ukuyizama.
Jan 21, 2010 kwi-8: 40 AM
Ndingathanda ukunika iplagin yakho yewordpress itrayi. Ndineeblogi ezininzi. Soloko unomdla kwinto entsha. Andingomthengi kodwa ndibone iposti kwibhlog yabo besithi ndingakunika uluvo apha ukuba unomdla wokuyizama. Undazise nje.
Feb 15, 2010 ngo-5: 28 AM
Igama lam ndinguVittorio,
Ndisebenza e-Italy kwi-ENEL inkampani yombane esebenzisana ne-webtrends kwaye siya kuba nomdla wokusebenza njengovavanyo lwe-beta.
ndingayenza njani lento?
Mar 1, 2010 ngo 6:37 PM
Ndingathanda ukujonga kwiplagi-in ukuba unokuba nobubele. Ndinabathengi abaqhuba iWebTrends kunye neWordPress abanokuyithanda. Ngaba iyafumaneka ukuba ikhutshelwe kwindawo ethile?
Mar 18, 2010 ngo-1: 27 AM
Oku kuvakala kukuhle. Ndineprojekthi eqhuba kwi-WordPress ekwafuna iWebTrends, ngaba kunokwenzeka ukukhuphela le plugin?
Epreli 14, 2010 ngo-3: 25 PM
Oku kubonakala kukuhle. Ngaba usajonge abantu ukuba bavavanye i-beta kwiplagi? Ndingathanda ukuyizama kufakelo lwethu lwe-MU ye-WordPress.
Epreli 20, 2010 ngo-3: 56 AM
Udibaniso lukhangeleka luthembisa kakhulu. Thina (kwi-ramboll.com) singathanda ukukwazi ukuyivavanya. Sineeblogi kuphela ngaphakathi kwi-firewall okwangoku, kodwa siqalisa iibhlog zangaphandle kwiiveki ezimbini. Ngaba kukho apho sinokuyikhuphela khona, okanye ngaba usondele ekukhululeni inguqulelo yokugqibela?
Juni 19, 2010 ngo-3: 02 PM
Oku kakuhle! Ndingathanda ukwenza uvavanyo lwe-beta. Ndineendawo ezininzi esizilandelelayo nge-webtrends.
Juni 17, 2011 ngo-12: 22 PM
Ndikonwabela kakhulu ukufunda amanqaku kule blog.Amanqaku ayenomdla kakhulu.Ndiyayixabisa le post imangalisayo
Juni 27, 2012 ngo-4: 48 PM
Molo Doug-Ndinomdla kwiplagin yakho. Ngaba usaphuhlisa oku? Ngaba ikwi-WordPress plugin repository? Kunzima ukuxela ukuba eli nqaku lingoku kangakanani kuba kungekho mhla, kodwa ndiyathemba ukuba le yiplagi yangoku osayixhasayo. Naluphi na ulwazi luluncedo - enkosi kwangaphambili!
Sep 18, 2015 kwi-10: 52 AM
Heather, uqaphele ukuba ngowona magqabaza akutshanje. Ngaba uye wakwazi ukufumana naluphi na ulwazi malunga nale plugin?
Sep 18, 2015 kwi-10: 51 AM
Doug, ngaba kukho uhlaziyo kule plugin? Sikwinkqubo yokuphuhlisa into efanayo, andazi ukuba uyinikezela esidlangalaleni okanye nokuba iyathengiswa.
Sep 18, 2015 ngo-12:38 PM
Ukuba ungumphuhlisi we-WordPress, ndingathanda ngokunyanisekileyo ukukongeza njengombhali kwaye uthabathe!